के हो एक्जिमा ?
रेश्मा सिंह ,
२०७६ फाल्गुण १ बिहीबार ११:४५:००
डा. रवीन्द्र शर्मा
एक्जिमा छालाको बाहिरी सतहमा लामो समयसम्म देखिने समस्या हो । छालामा रोगप्रतिरोधी क्षमताको कमी भएपछि यो समस्या देखिन्छ । एक्जिमा बढीजसो नवजात शिशुमा देखिन्छ र बाल्यकालसम्म रहन्छ । वयस्क अवस्थामा पनि देखा पर्न सक्छ ।
व्यक्तिअनुसार यसका लक्षण फरक–फरक देखा पर्न सक्छन् । जसलाई मेडिकल भाषामा ‘एटोपिक डर्माटाइटिस्’ भनिन्छ । र, यसको मुख्य लक्षण एक्जिमा भएको ठाउँमा अत्यधिक चिलाउने हो । एक्जिमा शरीरको जुनसुकै भागमा देखा पर्न सक्छ । तर, अनुहारको छाला, कुहिनो, घुँडा, नाडी र घाँटीमा बढी असर गरेको पाइन्छ ।
एक्जिामा देखिएको शरीरको भागको छाला भिजेको जस्तो हुने
थोपा–थोपा पानी बगिरहने
छाला पोल्ने वा छालामा जलन हुने
छालाको पत्र–पत्र निस्किने
चाउरिने र रातो हुने
स–साना पानी फोका आउने
छालामा सुक्खापन बढी हुने ।
समस्या देखिएपछि छालारोग विशेषज्ञसँग परामर्श गर्ने
‘टोपिकल’ नामक औषधि छालाको सतहमा लगाउने
चिकित्सकको सल्लाहमा एक्जिमाको अवस्थाअनुसार अन्य औषधि सेवन गर्ने ।
एक्जिमा शरीरको जुनसुकै भागमा देखा पर्न सक्छ । तर, अनुहारको छाला, कुहिनो, घुँडा, नाडी र घाँटीमा बढी असर गरेको पाइन्छ ।
छालालाई ओसिलो पार्ने क्रिमको प्रयोग गर्ने
छालाको सतहमा ‘स्टेरोइड क्रिम’ वा लेप लगाउने
एलर्जी गराउने कुराबाट टाढा रहने
परावैजनी प्रकाशबाट बच्ने
दिनको दुई–तीनपटक छाला ओसिलो राख्न क्रिम प्रयोग गर्ने
धेरै चिल्लो भएको वा सुगन्ध नभएको क्रिम प्रयोग गर्ने
साबुनको सट्टा मोइस्चराइजर प्रयोग गर्ने
साबुन, जेल र डिटर्जेन्टबाट टाढा बस्ने
घरको काम गर्दा पन्जा लगाउने
नुहाइसकेपछि मोइस्चराइजर लगाउने
आरामदायी कपडा लगाउने
सुती र ऊनीका कपडा प्रयोग नगर्ने
एलर्जी हुने जनावर नपाल्ने ।
छालारोगबाट प्रभावितहरूसँग संगत
जलन हुने तथा एलर्जी गराउने पदार्थको प्रयोग
बच्चामा दाँँत आउँदा
अत्यधिक तनावलगायतका कारणबाट यो समस्या देखा पर्छ ।